Cables & Adapters – Tagged "USD" – ICT.com.mm
Targus Dock 310 Universal USB-C DV4K Docking StationK432,170
Transcend RDF8W2 Unmatched Versatility Card Reader (White)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: RDF8W2 Warranty:2Years USB Type: micro USB to USB Type A Connection Interface: USB 3.1 Gen 1 Dimensions: 67.6 mm x 45 mm x 15.2...
Transcend RDF9K2 UHS-II Card Reader (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: RDF9K2 USB Type: micro USB to USB Type A, USB 3.1 Gen 1 Dimensions: 67.6 mm x 45 mm x 15.2 mm Weight: 30.6 g (1.08...
Transcend HUB5C 6-in-1 Type-C Hub (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: HUB5C Dimensions: 103.5 mm x 44.9 mm x 12.3 mm (4.07" x 1.77" x 0.48") Weight: 51 g (1.80 oz) Input Interface: USB 3.1 Gen 2,...
Transcend HUB2C USB Type-C 4-Port Hub (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: HUB2C USB Type-A x4 (USB 3.1 Gen 1) Dimensions: 73.8 mm x 37.2 mm x 10.4 mm (2.91" x 1.46" x 0.41") Weight: 29 g (1.02...
Transcend RDC3 Type-C Multifunctional Card Reader (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: RDC3 USB 3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1 Card Readers Dimensions: 40.8 mm x 40.8 mm x 10.4 mm (1.61" x 1.61" x 0.41") Weight:...
Link Cat6 Patch Cord (2M)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Length:2meter CAT6 Ethernet Cable suitable for connecting your laptop, PC and Network device. Super-Fast Cat6 so will handle high speeds easily. Easy to connect simple...
Dell Hybrid Adapter+Power Bank USB-C (PH45W17-CA)-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Device Type: External battery pack + power adapter Battery Technology: 4-cell Lithium Ion Battery Capacity: 12800 mAh Dimensions (WxDxH): 7.8 cm x 17.3 cm x 2.25 cm...
Dell USB-C Mobile Adapter-DA300 (Black)-3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Product Type: Cables & Adapter Docking Interface: USB-C Video Interfaces: VGA Dimensions (WxDxH): 2.75 in x 1 in Interfaces: USB-A, 1xUSB-C, 1xdisplay/video – HDMI, 1xdisplay/video – VGA,...
Lenovo USB-C to VGA Adapter (4X90M42956)-10
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။The Lenovo USB-C to VGA adapter turns an available USB-C port intoaVGA display adapter for connecting to any display, projector or TV withaVGA input.The...
VGA Cable China (40 meter)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။Brand: Unbranded Color: Black line , Blue head Length: 40m
VGA Cable China (30 meter)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Unbranded Color: Black line , Blue head Length: 30m
HDMI Splitter 1x4 Port Spliter 4K x 2K
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Unbranded Color: Black
VGA Spliter 16 Port 350MHZ